Nhau - Nei tembiricha inotakura yepombi yemvura yakanyanyisa uye nei?
Nei kupisa kwekutakura kwepombi yemvura kwakanyanya uye nei?
1. Kukotama kana kusarongeka kwemubato wepombi yemvura kunokonzeresa kuti pombi yemvura idedere uye inokonzeresa kupisa kana kupfeka kwekutakura.
2. Nekuda kwekuwedzera kweiyo axial thrust (semuenzaniso, kana bhalanzi disc uye yero yeremu mupombi yemvura zvanyatsosakara), iyo axial mutoro uri mukutakura unowedzerwa, zvichikonzera kutakura kupisa kana kutokuvara. .
3. Huwandu hwemafuta ekuzora (girizi) mukutakura hauna kukwana kana kuwandisa, hunhu hurombo, uye kune marara, pini dzesimbi uye mamwe marara: Iko kutakura kwekutakura dzimwe nguva hakutenderi nekuda kwekukuvara kwemafuta, uye kubereka hakugone kuunzwa mumafuta kukonzeresa kuti iko kupisa kupisa.
4. Iyo inobata inoenderana clearance haina kusangana nezvinodiwa. Semuyenzaniso, kana enzanirana pakati pokutakura mhete yomukati uye pombi yemvura mugodhi, inobereka mhete yekunze uye muviri unotakura wakanyanya kusununguka kana kunyanyisa, zvinogona kukonzera kubereka kupisa.
5. Iyo static balance yeiyo mvura pombi rotor haina kunaka. Iyo radial simba remvura pombi rotor inowedzera uye iyo inotakura mutoro inowedzera, zvichikonzera kutakura kupisa.
6.Kudengenyeka kwepombi yemvura painenge ichishanda pasi peye- asina dhizaini mamiriro kunokonzeresa iyo pombi yemvura inotakura kupisa.
7. Kutakura kwave kwakakuvara, izvo zvinowanzo kuve chikonzero chakajairika chekutakura kupisa. Semuenzaniso, iyo yakasungirirwa roller yakatakura inoramba yakakuvara, iyo simbi bhora inopwanya iyo yemukati mhete kana yekunze mhete inoputsika; iyo alloy rukoko rwekutsvedza inotakura inosvuuka ndokudonha. Panyaya iyi, kurira kwekutakura hakuna kujairika uye ruzha runonzwika, saka kubereka kunofanirwa kukatanurwa kuti kuongororwe nekutsiviwa nenguva.
Chengetedzo kubva pakunyanyisa kukwirira kwepombi yemvura inotakura tembiricha:
1. Teerera kune iyo yekuisa mhando.
2. Simbisa kuchengetedza.
3. Mabheyari anofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nedhata rakakodzera.
Post nguva: Oct-24-2020